1 Atemmusɛm a odiyifo Habakuk nyae wɔ anisoadehu mu ni: 2 O Yehowa, minsu nkosi da bɛn na woate?+ Memfrɛ wo nkosi da bɛn na woagye me afi amumɔyɛsɛm mu?+ 3 Dɛn nti na woma mihu adebɔne na wokɔ so hwɛ ɔhaw yi? Dɛn nti na adesɛe ne amumɔyɛsɛm wɔ m’anim, na dɛn nti na ɔham ne ntawntawdi abu so yi?+ 4 Eyi nti mmara asinsen na atɛntrenee mfi adi.+ Na esiane sɛ abɔnefo atwa treneefo ho ahyia nti, atɛntrenee befi adi no na akyea.+ 5 “Monhwɛ amanaman no mu, na munhu na montɛɛ mo anom nhwɛ mo ho,+ na mo ho nnwiriw mo, efisɛ obi reyɛ adwuma bi wɔ mo bere so, na sɛ wɔka kyerɛ mo mpo a, morennye nni.+ 6 Hwɛ, mɛma Kaldeafo aba,+ ɔman a ne tirim yɛ den na n’ani so yɛ hyew, na ɔbɛkɔ asase tɛtrɛɛ so akɔfa atenae a ɛnyɛ ne de adi so.+ 7 Ɔyɛ ahuabɔbirim, na ne ho yɛ hu. N’atemmu ne n’anuonyam fi n’ankasa.+ 8 N’apɔnkɔ ho yɛ hare sen asebɔ, na wɔn ho yɛ hu koraa sen anadwo mpataku.+ N’apɔnkɔ de wɔn nan pempem fam kimkim, na wofi akyirikyiri reba. Wotu fãã te sɛ ɔkɔre a ɔde ahoɔhare rekodidi.+ 9 Ɔman mũ no nyinaa di amumɔyɛsɛm.+ Wɔn anim te sɛ apuei mframa,+ na wɔboaboa nnommum ano te sɛ anhwea. 10 Odi ahene ho fɛw, na abirɛmpɔn ho yɛ no serew.+ Ɔserew abannennen,+ ɔboaboa dɔte ano, na ɔfa. 11 Saa bere no, obetwam te sɛ mframa, na ɔbɛsen akodi fɔ.+ Ne tumi yi fi ne nyame.”+ 12 O Yehowa, wunni hɔ fi tete anaa?+ Me Nyankopɔn, me Kronkronni, wunwu.+ O Yehowa, wode asi hɔ ama atemmu; Ɔbotan,+ wode atim hɔ ama ntɛnyi.+ 13 W’aniwa yɛ kronkron dodo sɛ ɛbɛhwɛ bɔne, na wuntumi nhwɛ abusude.+ Na dɛn nti na wohwɛ nkontompofo,+ na woyɛ komm ma ɔbɔnefo mene nea ɔteɛ sen no yi?+ 14 Na dɛn nti koraa na woyɛ ɔdesani sɛ po mu mpataa, sɛ mmoa a wɔwea a wonni sodifo biara yi?+ 15 Ɔde darewa ayi eyinom nyinaa;+ ɔtwe wɔn n’asau mu, na ɔboaboa wɔn ano n’atena+ mu. Ɛno nti n’ani gye na odi ahurusi.+ 16 Enti ɔbɔ afɔre ma n’asau na ɔhyew aduhuam ma n’atena, efisɛ ɛma onya aduan sɔkyee, aduan a ahoɔden wom.+ 17 So ɛno nti na onya biribi fi n’asau mu? Na ɛsɛ sɛ okunkum amanaman daa a ɔrenhu mmɔbɔ anaa?+